Frank’s Design “Makomo Makomo” Won The “AuTo Design Award 2019” Kwakanaka Basa
Mazuva ano, vanhu vanobhadhara zvakanyanya nekunakisisa kune mhando uye dhizaini yeinotungamirwa yegirazi yekugezera kabati. Semuyenzaniso, midziyo yemumba yekugezera haifanirwe kungova nechitarisiko chakanaka uye kushongedza asiwo inowedzera basa rekuchengetedza chimbuzi. Zvisinei, kune mhando zhinji dzezvisina maturo zvekugezera…
Maitiro Ekutenga Yakakodzera Yekugezera Cabinet ?
Iyo yekugezera kabhodhi chidimbu chemidziyo yakakosha mune yekugezera fanicha. Kabati inotaridzika uye inowoneka yekugezera haingogone kubatsira vanhu zvirinani kuchengetedza zvinhu asi zvakare inogona kutamba yekushongedza maitiro. Parizvino, kune marudzi mazhinji emakabati makabhati mumusika, nezvitaera zvakasiyana…
China yepamusoro-soro yekugezera kabhinari inopa zvakananga kutengesa uye magadzirirwo ehukuru hwakasiyana uye mafashoni eimba yegirazi rekushambadzira kabati!! Midziyo yemubhedha chinhu chakakosha mumba medu. Imba yekugezesa yakakodzera inozadza imba yedu yekugezera kumusoro. Kamuri yokugezera yakanaka inokwanisa kuita kuti hupenyu hwedu huwedzere kunaka. Saka zvakakosha kwazvo…
Matagi: Bathroom Cabinet, Bathroom maturo
Gadzirisa zvisina maturo zvekugezera kubva kuChina mugadziri mune akasiyana masitayera uye zvigadzirwa , zorodza imba yako yekugezera!!! Sezvo isu tese tichiziva, Bathroom girazi kabati ndiyo yakakosha fenicha mune yese yekugezera. Imba yekushambidzika yakanaka yekushambidzika ichaita kuti imba yekugezera iwedzere mafashoni uye yakanaka. Wedzera imwe yekukurumidza glam ku…
Nzira yekusarudza yakanaka yekushambidza bheseni, imba yekushambidzira kabati uye girazi reimba yekugezera
Parizvino, zvimbudzi zvakawanda mudzimba zvinogona kuwana kupatsanurwa kwakaoma uye kwakanyorova uye nyore kushandisa, asi maitiro ekuvandudza kukosha kwechimbuzi ave kunetsa kune vazhinji varidzivedzimba. Ini ndinofunga kuti kusanganiswa kwemumba yekugezera makabati, madhishi, and bathroom mirrors in the bathroom is a good…
Kuunzwa kweMetana yokupfeka Tafura
MANTANA Vanity Unit inowanikwa muhupamhi hwe 800 mm, 1000 mm, 1200 mm uye 1,500 mm. Inouya neyakakura, zvinonyatsodzokerwa, zvinyoro-nyoro zvekuvhara dhirowa nemasuo ane rinogona kushambidzwa anti-slip mat, uye chakavanzika chemukati dhizaina chinobvisika chengetedzo. The ceramic washbasin has no overflow.…
Iwo Matanda Ekushanda Anokodzera Bheti Yokugezera?
Iko hakuna kuramba kuti matanda emapuranga anotaridzika zvakanaka mune chero imba yekugezera, asi nezvakawanda zvakagadzirwa, panofanirwa kuve nechinhu chekukwira kuti uve nechokwadi chekuti nzvimbo yekushandira inotaridzika zvakanaka sezuva raakaiswa. KuFRANK, pane kugovera matanda matanda akasimba, we have four…
Vanosvika vatsva veshawa yekushambidza
Tsika yakanyura iri mbiri uye yakapusa iyo inounza flair yemazuva ano kune zvakatipoteredza. Elegance of genuine Italian Carrara marble vanity with sink and brass feet is designed to bring our customer elegance and contemporary home. Select from several finishes to coordinate the mirror seamlessly with the washstands…
Ndeapi marudzi emagirazi ekugezera?
Kune magirazi mubhavhu rekugezera. Izvo zvinoshandiswa kuchenesa zvigadzirwa zvedu. Patinomuka mangwanani kunoshamba kumeso kwedu uye nekutarisira magadzirirwo atinoita, ine yakanaka kwazvo yekushongedza maitiro uye zvakare inoshanda chaizvo. There are many types of bathroom mirrors…
4 masitadhi emakamuri ekugezera akakurumbira izvozvi, unozivei
Isu tese tinoziva kuti kune akati wandei marudzi eimba yekushongedza ekushongedza mafashoni. Saizvozvo, maitiro emakamuri ekugezera emakamuri anokwanisa zvakare kukamurwa mumhando dzinoverengeka. Kuti uwane yakanakisa yekushongedza maitiro mune yekugezera, kusarudzwa kweyekushambidzira kabhinari maitiro kwakakosha zvikuru. The style of the…
Saizi ipi yaunofanira kusarudza iyo yakapfava yekugezera kabhinari?
Ndeipi saizi yepasiri yekugezera kabhinari kabati? Iko kunofanirawo kuve nekutarisa kana uchishongedza. Ikozvino kusarudzwa kwehukuru kunoenderana nezvinhu zvakawanda. Mukusarudzwa chaiko, tinofanira kuita chirongwa chakazara. Here we take a look at the items that must be paid attention…
Peji 1 of 1 1